खरो विचारका निबन्ध | मझेरी डट कम
kbs — Thu, 05/05/2011 - 19:31
'बलेको आगो' शीर्षकीय निबन्धसङ्ग्रह कवि मित्रलाल पंज्ञानीको नयाँ परिचय हो । २०३७ देखि २०६५ सालसम्ममा पाँचओटा कविता कृति प्रकाशित गरिसकेका पंज्ञानीले छैठौँ कृतिका रूपमा निबन्धसङ्ग्रह प्रकाशन गरेका हुन् । यो पंज्ञानीकै लागि पनि अभिव्यक्तिको नयाँ स्वरूप हो र पाठकले पनि यसबाट नयाँ ऊर्जा पाउने निश्चित छ ।
अप्ठ्यारामा कसरी बाँच्छ मान्छे ? मन एकातिर तन अर्कातिर हुँदा कसरी सोच्छ मान्छे ? आफू जहाँ छ, जुन लाइनमा छ त्यही बेठीक लागिरहँदा र आफू जहाँ छैन त्यही चाहिँ ठीक जँच्दा कसरी सम्हालिन्छ मान्छे ? यस सङ्ग्रहका अधिकांश निबन्धहरू लेख्ने बेलामा सायद मित्रलाल कुनै राजनीतिक आस्थामा थिए । उनलाई त्यस समूहप्रति भरोसा थिएन, उनीहरूको विकृत मानसिकता देखेर क्षुब्ध थिए तर पनि थिए त्यही ठाउँमा । सम्भावनाहरूले भरिएको भए पनि सही नेतृत्वको अभावमा क्रमशः शिथिल हुँदै गएको आफ्नो जीवनलाई छक्क पर्दै हेर्छन् -"केही गर्लाजस्तो मान्छे केही गर्नै नसक्ने भएर कसरी इतिहासको गर्तमा बिलाउँछ ? हेर्दै छु ।"
पंज्ञानीको निबन्धको अर्को शक्ति हो आक्रोसको शक्ति । जहाँजहाँ पंज्ञानी रिसाउँछन्, त्यहीँत्यही निबन्धले चमत्कार देखाउँछ । 'भावना, राजनेता र कवि' निबन्धमा मौनधारणका विषयमा नेतालाई दिएको दनक होस् वा 'तँ चोर होस्' भन्ने निबन्धको तीव्र आक्रोस तर निबन्धकार डराउनु हुँदैनथ्यो ।
'औपचारिकतामा कुनै शक्ति हुँदैन' भन्ने पंज्ञानीले सगरमाथाको फोस्रो महिमालाई खिल्ली उडाएका छन्- 'सर्वोच्चता तब मात्रै गर्वयोग्य हुन्छ, जब त्यसले दुनियाँको कल्याण गर्छ । अन्यथा त्यो सर्वोच्चतालाई दुनियाँले ढोगेर हिँड्न जरुरी छैन ।'
नाघ्दै हिड्छु बारहरु
चन्चले यो मनको रहर
छाकै पिच्छे युद्ध हुन्छ
रुन्छौ किन हाँस्दै अघि, बढ्नु पर्छ अब
आत्मदाह छाडेर 'माधवी' लेखेँ
पर्यटकको पर्खाइ नारायणस्थान
हाँसी हाँसी जन्म लिन्छु
भय दर्शनको मझेरीमा (तस्बीर सहित)